जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओको को’रोना संक्रमणबाट मृ’त्यु” – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठशिक्षा/स्वास्थजगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओको को’रोना संक्रमणबाट मृ’त्यु”
जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओको को’रोना संक्रमणबाट मृ’त्यु”
वीरगन्ज। जगदम्बा इन्टरप्रा इजे’जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) को कोरोना संक्रमणबाट मृ’त्यु भएको छ । जगदम्बाका ५६ वर्षीय सीईओको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा उपचारको क्रममा बिहीबार राति मृ’त्यु भएको छ । उनी भारतीय नागरिक हुन् । को’रोना अस्प’तालका इ’न्चार्ज डा.निरज’कुमार सिंहका अनुसार सी’ईओ लामो स’मयदेखि मुुटु’सम्बन्धी रो’गबाट पी’डित थिए ।
उनको केही समयअघि मुटुको बाइपास शल्यक्रिया भएको थियो । संक्रमण पुष्टि भएपछि गत साउन ७ गते उनी कोरोना अस्पताल भर्ना भएका थिए । ‘उनी मु’टुरो’गी थिए, मुटुको बाइपास सर्जरी भ’इसकेको थियो,’ डा.सिंहले भने, ‘बिहीबार शरीरमा अक्सिजन कम भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेका थियौँ, राति साढे ११ बजे उनको मृ’त्यु भयो ।’ बिहीबार रा’ति नै को’रोना अस्प’तालमा जगदम्बाका सीईओसहित ३ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिका १६ नगवाका ३५ वर्षीय पुरुष र वीरगन्ज २ छपकैयाका ६५ वर्षीय पुरुषको मृ’त्यु भएको हो । नगवाका ३५ वर्षीय पुरुषको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा साँझ पौजे ८ बजेतिर मृ’त्यु भएको डा. निरज सिंहले जनाए । मंगलबार ज्वरो र श्वासप्र’श्वासको समस्या भएर आएका उनलाई आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरी स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।
ती युवक ज्वरो आएपछि गत साउन ५ मा एक निजी क्लिनिकमा पुगेका थिए । स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि १३ गते तराई हस्पिटल गएका उनलाई त्यसैदिन कोरोना अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । मृ’त्युपछि बिही’बार राति उनको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको डा.सिंहले बताए । यसैगरी बिहीबार बिहान घरमै मृ’त्यु भएका वीरगन्ज २ छपकैयाका ६५ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ ।
घरमै मृत्यु भएको खबर आए’पछि नारायणी अ’स्पतालको टो’लीले उनको स्वाब संक’लन गरेको थियो । बि’हीबार रा’ति उनको पीसीआर रिपोर्ट पो’जिटिभ आ’एको को’रोना अस्पतालका डा.सिंहले बताए । सा’उनयता पर्सामा को’रोना संक्र’मणले १० जना’को मृ’त्यु भ’इसकेको छ । योसँगै ने’पालमा को’रोना भा’इरसबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ५५ पुगेको छ ।-कान्तिपुरबाट
खुशीको खबर विश्वको पहिलो कोरोना बिरुद्धको भ्याक्सिनले बुधबार स्विकृति पाउने”
विद्यालय, कलेज खोलेर कहिले देखि पढाउने भन्ने विषयमा यसो भन्छ्न शिक्षा मन्त्री पोखरेल !
कोरोना प्र’कोप : अब दशैं अगाडि विद्यालय नखुल्ने”
खुशीको खबर : कक्षा ११ का विद्यार्थीको परीक्षा शु’ल्क फिर्ता हुने”
एसईईको परीक्षा शु’ल्क फि’र्ता गर्न माग”